Ungazilungelelanisa njani iimvakalelo ze-smartphone ye-Android | I-Androidsis
Iifowuni ze-Android zinenani leenzwa ezifakiwe. Okuphambili, kubonakala ngathi yinxalenye esingayiniki ukubaluleka kakhulu, kodwa zibalulekile ekusebenzeni kakuhle kwefowuni yethu. Ngamanye amaxesha, ngenxa yezizathu ezingaziwayo, enye yezi zivamvo inokuyeka ukusebenza, ngokuyinxenye okanye ngokupheleleyo. Into eyongeza ekubeni iyacaphukisa inokubangela iingxaki ekusebenzeni.
Ke kulungile ukwazi indlela ekufuneka silungelelanise ngayo iinzwa zefowuni yethu ye-Android. Nantsi into esiza kukufundisa yona ngokulandelayo. Ukuze unqande iingxaki ezinokubakho kwisixhobo ngaxa lithile.
1 Jonga inzwa
2 Ukulinganisa iisenzi kwi-Android
2.1 UkuLungiswa kweTuneUp ngokukhawuleza kweFowuni
Okokuqala, ukuba siyaqaphela ukuba nayiphi na inzwa inika iingxaki, kulungile ukukhangela ukuba imvelaphi yayo ikwi-sensor okanye ivela kwisicelo esisisebenzisayo. Yayo, Singalanda isicelo se-Android esilawula ukuvavanya iisenzi, ibizwa ngokuba zii-Multi-Tool Sensors, sishiya ikhonkco laso ngezantsi:
Izixhobo ezininzi zemishini
Umthuthukisi: Isoftware eyiWered
Ukongeza ekubeni nakho ukukhuphela usetyenziso, sinenye indlela ekhoyo yokujonga ukuba ngaba inzwa isebenza kakuhle na. Nangona ngayo Siza kusebenzisa iimenyu ezifihlakeleyo esinazo kwi-Android. Kuya kufuneka siye kwi-dialer yefowuni kwaye sibhale ikhowudi ethile, kule meko yile: * # * # 4636 # * # *
Ukuba unayo ifowuni ye-Sony Xperia, le khowudi yokuqala ayinakukunceda (ungazama nje xa kunokwenzeka). Kodwa, ukuba ayisebenzi, ungasoloko usebenzisa le khowudi: * # * # 7378423 # * # *
Kuzo zombini iimeko kuya kusisa kwimenyu efihliweyo apho kukho icandelo lovavanyo. Apho sinokuvavanya ukuba inzwa yefowuni isebenza kakuhle, ukukhetha phakathi kweenzwa ezahlukeneyo. Ke yindlela ehlala isebenza kakuhle. Nangona eli candelo lisenokungafuneki kubasebenzisi abaninzi, abafuna ukuqhubela phambili balungelelanise ii-sensors ngokuthe ngqo.
Ngendlela, kwezinye iifowuni ze-Android, awunyanzelekanga ukuba usebenzise iimenyu ezifihliweyo. Kukho iimodeli ngaphakathi kwezakhelo esinecandelo lezinzwa. Ke sinokujonga imeko yabo ngendlela elula. Kodwa ukukhuphela usetyenziso lovavanyo kukhululekile kwaye basebenza ngokugqibeleleyo ekufumaneni ukuba ngaba inzwa ekuthethwa ngayo isebenza kakuhle okanye hayi.
Ukulinganisa iisenzi kwi-Android
Ukuba sikhuphele isicelo okanye senze uvavanyo, kwaye inzwa ekuthethwa ngayo ayisebenzi ngokuchanekileyo, kuya kufuneka sithathe inyathelo. Lixesha lokuba ulungelelanise isivamvo okanye isivamvo kwifowuni yethu ye-Android. Kule meko, sinokukhetha okuninzi, kuba kuxhomekeke kumenzi, kukho iindlela ezahlukeneyo zokwenza oko.
Ngokomzekelo, Iifowuni ze-LG zinomsebenzi wazo kuseto oluvumela ukuba inzwa ilungiswe umbuzo. Umsebenzi okhululekileyo. Kule meko, kufuneka uye kuseto kwaye emva koko uye kwicandelo ngokubanzi. Ngaphakathi uyakufumana icandelo elibizwa ngokuba yintshukumo. Ngena kwaye kufuneka ulandele amanyathelo aboniswe kwiscreen. Ngale ndlela, emva kwemizuzwana embalwa, inzwa ekuthethwa ngayo iya kulungiswa.
Kuthekani ngezinye iimveliso? Ayizizo zonke ezi zinenqaku elibonelelwa yi-LG kubasebenzisi. Kule meko yetyala sinokhetho olunokubakho, olunokusinceda ukuba silinganise iinzwa zefowuni yethu ye-Android. Ukuba ufuna ukuqiniseka, ungakhangela kuseto lwakho, Ukujonga ukuba akukho msebenzi na wokulinganisa ii-sensors, kwimeko apho.
Ukuba akunjalo, indlela yokuzilinganisela, nangona inzima kakhulu, kukuseta idatha kwakhona. Ngokwenza oku, ibuyela kwimeko yoqobo, ekwabangela ukuba ii-sensors ziphinde zilungelelaniswe ngokuzenzekelayo.
Ukuba oku kugqithise kakhulu, ungasebenzisa usetyenziso. Kukho usetyenziso kwiVenkile yokudlala enoxanduva lokulinganisa abenzi boluvo. Kukho abo baphethe iimvakalelo ezithile kunye nabanye abazenzayo zonke. Sikushiya nesona sicelo silungileyo kule meko:
UkuLungiswa kweTuneUp ngokukhawuleza kweFowuni
Lukhetho olupheleleyo, olulinganisa zonke izinzwa kwifowuni yakho ye-Android. Yisebenzise kwindawo ethe tyaba:
Umthuthukisi: IiNkqubo zeRedPi
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ungazilungelelanisa njani izixhobo zakho zefowuni
Yenza kungasebenzi kwaye kusebenze inzwa yeminwe ngalo lonke ixesha nge-AdminControl